16 × 24 Plus Size Auto Open Heat Press Machine
Ity milina ity dia be mpampiasa amin'ny fanontana na amin'ny hafanana fitsaboana ny vokatra vita amin'ny hoditra, lamba ary lamba, seramika ary vokatra vy.
Auto Misokatra Heat Press Machine
Ity milina fanodinam-paosin-jirom-borona lehibe ity dia mampiasa fiasa pneumatika vaovao, miakatra tampoka amin'ny fandaharam-potoana, mampitombo ny fahombiazan'ny asa, mora sy mora.
25 × 100 Masinina famindrana hafanana takelaka hafanana
Ny milina fanontam-pirinty hafanana lanyard dia nandray ny fifehezana dizitaly, ny maripana celsius ary ny fahrenhelt dia azo ovaina, ny fotoana ary ny seho mandritra ny metatra iray ihany. Ny bokotra fanitsiana faneriterena, afaka manitsy ny bokotra na dia eo aza ny tsindry. Na ny vokatra fanontana aza, ny silikone na dia ny fanontana aza.
T-shirt Machine Press Press Press
Heat Press Machine izay mandray ny seho nomerika elektrika sy ny thermostat, ny fahamendrehana avo lenta (± 2 ℃). Ataovy miaraka ny fantsom-pandrefesana sy ny lozam-pifamoivoizana, azo antoka, mendri-kaja ary mari-pana sy fanerena. Fanaraha-maso ny fotoana elektrika, famantarana famantarana aorian'ny fahavitan'ny dingana.
5 amin'ny 1 Combo Heat Press Machine
Ity milina fanodinana hafanana 5 amin'ny 1 ity dia afaka mamindra sary, teny amin'ny landihazo, fibre, vy, kitapo, tsihy totozy, ankamantatra, taila, takelaka, vera sns. Ampiasao ity milina ity mba hanaovana akanjo Halloween farany na akanjo Halloween ary hanaovana akanjo Krismasy.
Milina fanontam-pirinty mafana
Ity no iray amin'ireo milina fanontam-pirinty maharitra maharitra maharitra miaraka amin'ny vidiny mirary sy ny fahombiazan'ny olana an-taonany maro. Fanaraha-maso fotoana sy nomerika feno.
6 amin'ny 1 Combo Pen Heat Press Machine
Ity milina fanoratana ity dia ampiasaina amin'ny karazana penina, toy ny penina plastika, pensilihazo sns ... Ny tsiranoka silôtôma azo hafanaina miaraka amin'ny tadivavarana penina 6, ahafahan'ny milina manonta logo amin'ny penina 6 isaky ny miaraka.
8 amin'ny 1 Combo Heat Press Machine
Ity milina fanaovana press combo in 8 ity dia afaka mamindra sary, teny amin'ny landihazo, fibre, vy, kitapo, tsihy totozy, ankamantatra, taila, takelaka, vera sns. Ampiasao ity milina ity mba hanaovana akanjo Halloween farany na akanjo Halloween ary hanaovana akanjo Krismasy.